Mani yarida oo caafimaaddarro lala xiriiriyay - BBC News Somali
Baaritaankan oo lagu sameeyay 5,177 oo rag ah ayaa lagu ogaaday in raga biyaha yar ay 20% uga dhawyihiin kuwa kale in ay cayilaan, cabirka dhiigoodu uu kor u kaco, dux aan "aan wanaagsanaynna" ay fuusho.
Dadka soo saaray cilmibaaristan waxay sheegeen in ay ogaadeen in dadka manida yar ay tahay in baaritaanno caafimaad oo kalana la mariyo.
'Halista ka dhalan karta'
Saddexdii lamaane ee kaste ee dhibaato ay ka haysato in ay tarmaan mid ka mid ah ayuu hooseeyaa xaddiga biyahiisa, tayada manidiisuna ay liidataa.
Basasha oo la ogaaday in lagula dagaalami karo cudurka qaaxada
Cilmibaaristan cuusub waxay saynisyahannadu baareen lamaanaha aan tarmaynin ee Talyaaniga jooga waxayna eegeen bal in tayada manidu ay xiriir la leedahay caafimaadka guud ee ragga.
Waxayna ogaadeen in ragga manidoodu ay yartahay ay leeyihiin calaamado halis ah sida cabirka jirka oo kordha, cabirka dhiiga oo sare u kaca. Arrimahaas ayaana sare u qaada halista ah in qofku uu qaado xannuuno ay ka mid yihiin wadne xannuun iyo qalal.
Dr Alberto Ferlin oo hogaaminayay cilmibaarista ayaa carrabka ku adkeeyay in cilmibaaristoodan aysan xaqiijinin in mani yaridu ay dhibaato keento, balse lala xiriiriyay.
Dr Ferlin wuxuu sheegay in cilmibaaristu ay muujisay in ay muhiimtahay in ragga dhalmo la'aanta laga dawaynayo laga baaro xanuunno kale.